नाच्दा नाज्दै उत्तेजित भए पछि यस्तो सम्म गरे( हेर्नुस भिडियो ) - Mitho Khabar
October 22, 2020 mithokhabarLeaveaComment on नाच्दा नाज्दै उत्तेजित भए पछि यस्तो सम्म गरे( हेर्नुस भिडियो )
भिडियो अन्तिममा छ हेर्नू होला गोविन्द बिक नौ वर्षका हुदाँ उनका बुवा बिते त्यसपछि आमा कलावती बिकले तीन छोरा र एक छोरीलाई मजदुरी गरेर हुकाईन । तीन दाजुभाईमा उनी माहिला थिए । उनीभन्दा अगाडि एक दिदी र दाई थिए भने पछाडि दुई भाई थिए। उनीहरुकाे जीवन सुकुम्बासी परिवारमै बितेकाे थियाे तर सहारा भने केही थिएन । बुवा बितेपछि परिवारको पालनपोषणको अभिभारा आमा कलावतीको काँधमा आयो । खेतीका लागि जमीन थिएन ।आमा कलावतीले अर्काको खेतमा काम गरिन । दाउरा बेचिन । मजदुरी गरिन । आफ्ना सन्तानलाई हुर्काउन उनले निकै हण्डर खाईन । अभाव झेलिन । पीडा भोगिनसम्पत्तीका नाममा एउटा ओत लाग्ने झुपडी थियो । त्यही झुपडीमा उनी हुर्किए । आमा कलावतीले अर्काको खेतमा काम गरिन । दाउरा बेचिन । मजदुरी गरिन । आफ्ना सन्तानलाई हुर्काउन उनले निकै हण्डर खाईन । अभाव झेलिन । पीडा भोगिन । तर पनि छोराछोरीलाई पढाएर ठूलो मान्छे बनाउने उनको सपना थियो । दाईभाईले धेरै पढ्न रुचि देखाएनन । दाई खेती किसानमा जुटे । कान्छो भाईले पनि एसएलएसी दिएपछि पढाई छोडे । दिदीको बिहा भयो । तर गोविन्दले पढाई छोडेनन ।छोरालाई पढाएर ठूलो बनाउने सपना पुरा गर्न उनले रातदिन मजदुरी गरिन,त्यसपछि गोविन्दले नेपाल प्रहरीमा प्रहरी सहायक निरिक्षकमा नाम निकाले त्यो दिन कलावतीका लागि मात्र नभएर उनको समुदायकै लागि ठूलो खुशीपुनर्वासको क गाउँमा रहेको बागेश्वरीमा माविबाट एसएलसी पास गरे र थप पढाईका लागि उनकी आमा कलावतीले कैलाली बहुमुखी क्याम्पस भर्ना गरिन । धनगढी डेरा गरेर पढाउन सक्ने आर्थिक हैसियत थिएन । तर पनि छोरालाई पढाएर ठूलो बनाउने सपना पुरा गर्न उनले रातदिन मजदुरी गरिन । तीन वर्षअघि आमा कलावतीको सपना पुरा भयो ।
गोविन्दले नेपाल प्रहरीमा प्रहरी सहायक निरिक्षकमा नाम निकाले त्यो दिन कलावतीका लागि मात्र नभएर उनको समुदायकै लागि ठूलो खुशीको दिन थियो । दलित समुदायबाट असई हुने गोविन्द पहिलो युवा थिए । पढेर के हुन्छ र भनेर बीचमै पढाई छोड्ने दलित समुदायका विद्यार्थीहरुका लागि त उनी प्रेरणाको स्रोत नै थिए । किनकी उनी आफ्नै बलबुता, अध्ययन र मिहिनेतले असई भएका थिए । उनको न पहूँच थियो । न त उनी कुनै राजनैतिक दलका कार्यकर्ता थिए । आमा कलावतीको छोरा ठूलो भएको हेर्ने सपना भने धेरै समय टिकेन ।धनगढी उपमहानगरपालिका—१२ जुगेडा स्थित प्रहरी चौकीको ईञ्चार्जको जिम्मेवारी सम्हालेका गोविन्द कार्तिक १ गते राति गस्तीको क्रममा निस्किएका बेला तस्करहरुको एम्बुसमा परेभदौ पहिलो साता धनगढी उपमहानगरपालिका—१२ जुगेडा स्थित प्रहरी चौकीको ईञ्चार्जको जिम्मेवारी सम्हालेका गोविन्द कार्तिक १ गते राति गस्तीको क्रममा निस्किएका बेला तस्करहरुको एम्बुसमा परे । उनको बिभत्स ढंगले तस्करहरुले ह त्या गरे । यो घट्ना गोविन्द बिकको मात्र ह त्या थिएन । आमा कलावतीको एउटा सपनाको पनि ह त्या थियो । उनीसंगै आश्रित श्रीमती, सात र तीन वर्षीया छोरी, दाई, भाउजु, उनीहरुका तीन सन्तान, भाई र बुहारी समेत गरी परिवारका ११ जना सदस्यको आशा र भरोसाको पनि हत्या थियो । गोविन्द राति गस्तीबाट हराएको खवर सुनेपछि अत्तालिएका उनकी आमा र श्रीमती उनको लाश भेटिएयता होसमा छैनन । परिवारका सदस्यहरु आफै विक्षिप्त झै छन् ।
आमा र उनकी श्रीमतीलाई कसरी सम्हाल्ने ?
यो खवर झुटा भईदियो हुन्थ्यो, मामा सुनाउदै थिए, नाबालक भाञ्जालाई मजदुरी गरेर हुर्काएकी दिदी र बुहारीलाई कसरी सम्झाउनु ? भाञ्जा गोविन्द सिंगो दलित समुदायको एक्लो असई थियोगोविन्दका मामा भरमल सुनाउदै थिए, हाम्रो त सपना र आशा भरोसा उही भाञ्जा थियो । उही तस्करहरुको निशानामा प¥यो । परिवारका सदस्यहरुलाई त यो खवरमाथि नै विश्वास लागिरहेको छैन । यो खवर झुटा भईदियो हुन्थ्यो, मामा सुनाउदै थिए, नाबालक भाञ्जालाई मजदुरी गरेर हुर्काएकी दिदी र बुहारीलाई कसरी सम्झाउनु ? भाञ्जा गोविन्द सिंगो दलित समुदायको एक्लो असई थियो । उसैलाई तस्करले मारिदिए । गोविन्दले धनगढीमा डेरा लिई छोराछोरीलाई पढाईरहेका थिए । उनको ह त्यापछि उनका छोराछोरी र श्रीमतीको त बिचल्ली भएको छ नै, उनको पुरै परिवार नै आर्थिक संकटसंगै नमेट्नि पीडा भोग्न बाध्य भएको छ ।
फागुन १९ गते सोमबार कस्तो होला तपाईको भाग्य ? हेर्नुस् राशीफल
जसले अरुको १ मत पनि पाएनन्, आफ्नो भोट पनि हरायो !
हारेपछि भोट किनेको पैसा फिर्ता माग्दै माओवादी उम्मेदवार, हेर्नुहोस भिडियो
पोखरामा ५० हजार मतगणना हुँदा धनराजको अग्रता कायम, पछ्याउँदै कृष्ण थापा
खुसिको खबर ! पल शाह भोलि छुट्दै , सत्यको जित , छायो यतिधेरै खुसियाली (हेर्नुस् भिडियो )